Info Desk | National Enlightenment Institute (NEI)
မုဒုံမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk မုဒုံမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မုဒုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၊ ....
ချောင်းဆုံမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk ချောင်းဆုံမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၊ ....
ကျိုက်မရောမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk ကျိုက်မရောမြို့နယ်၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဥ်း ………………………………………………………………….. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၊ ....
မွန်ပြည်နယ်တွင် အနိုင်ရရှိသောအသက်အကြီးဆုံးနှင့် အသက်အငယ်ဆုံးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ရွေးချယ်တင်မြောက် ခံရသော အသက်အကြီးဆုံးနှင့် အသက်အငယ်ဆုံး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ………………………………………………………………… မွန်ပြည်နယ်၏ မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးတွင် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရသော ....
လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ အစည်းအဝေးတွေ ဘယ်အချိန်စခေါ်ကြမလဲ?
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk လွှတ်တော်အသီးသီးရဲ့ အစည်းအဝေးတွေ ဘယ်အချိန်စခေါ်ကြမလဲ? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဟူ၍ သုံးရပ်ရှိသည့်အနက် ....
မွန်ပြည်နယ် (တိုင်းရင်းသား) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှုအခြေအနေ
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk မွန်ပြည်နယ် (တိုင်းရင်းသား)လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ ………………………………………………. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်မွန်ပြည်နယ်(တိုင်းရင်းသား)လွှတ်တော် အတွက် ကရင်တိုင်းရင်းသား၊ ....
သထုံမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk သထုံမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ ………………………………………………. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် သထုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ....
ဘီးလင်းမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk ဘီးလင်းမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ ………………………………………………. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဘီးလင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ....
ပေါင်မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk ပေါင်မြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ ………………………………………………. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပေါင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ....
ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၀ ။ NEI’s Election Info Desk ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှု အခြေအနေ ………………………………………………. ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ....